अपमान परराष्ट्र मन्त्रीको वा सम्पूर्ण नेपालको ? - Supadeuralionline::सुपादेउराली अनलाइन
अपमान परराष्ट्र मन्त्रीको वा सम्पूर्ण नेपालको ?
नेपालको अपमान भयो, त्यो सरकारले अपनाउँदै गएका गलत नीतिको परिणाम हो । सरकारले बारम्बार भारतका अगाडि दब्बू नीति अपनाउँदै गएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकबारे त्यसले सही र दृढ नीति अपनायो । तर त्यस प्रकारको दृढतालाई त्यसले निरन्तरता दिन सकेन ।
आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि उनी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुरसित गुहार माग्न पुगे । उनको त्यो दौड यहाँसम्म पुग्यो कि उनी आफ्नो रक्षाका लागि भारतको शरणमा पनि पुगे । गोयलसितको उनको गोप्य वार्ता त्यसैको परिणाम थियो । कतिपय स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालबाट फर्केपछि गोयलले यो सम्म भनेका थिए : ‘हामीले चाह्यौँ भने ओलीले दुई घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनेछन् । त्यसले बताउँछ, भारतका अगाडि अब उनको मूल्य कति रहेको छ ? संसदको विघटनपछि उनी अब संसदको सदस्य पनि रहेका छैनन् । त्यो अवस्थामा उनको सरकार काम चलाउ सरकार भएको छ । तर उनले पुरा र अधिकार सम्पन्न सरकार भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर नेपालका जनता मात्र होइन, पुरै संसार उनको त्यो दाबी स्वीकार गर्न तयार छैन । त्यसरी ओलीले आफूलाई एउटा हास्यास्पद पात्रको रूपमा परिणत गरेका छन् । आफ्नो पार्टीलाई फुटाएर संसदको विघटन गरेपछि उनी कति कमजोर भएका छन् ? त्यो कुरा शेरबहादुरले उनलाई खेलाइरहेको कुराबाट थाहा हुन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदसम्म दिने गरेर शेरबहादुर देउवाको अनुग्रह प्राप्त गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । तर देउवाले जवाफ दिने गरेका छन्, ‘यसबारे मैले पछि विचार गर्ने छु ।’ ओलीको गलत नीतिले उनको सम्पूर्ण सङ्गठन नै कमजोर भएको छ । विभाजित ओली तथा प्रचण्ड–माधव दुवैको स्थिति कमजोर भएको छ । त्यसका लागि मुख्य दोषी ओली नै छन् ।
ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध देशमा आन्दोलन बढ्दै गइरहेका छन् र ती अरू बढ्दै जानेछन् । ती आन्दोलनका विरुद्ध ओलीले पनि ठूलाठूला सभाको आयोजना गर्दैछन् । तर स्वयं ओलीको निम्नस्तरको र अराजनीतिक प्रकारको भाषाशैलीले यी सबै ठूलाठूला सभालाई तमाशा बनाउँदै लगिरहेको छ । स्वयं ओलीको त्यसप्रति ध्यान गएको छ ?
ओलीले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले उठाएका संवैधानिक प्रश्नहरूको जवाफमा तल्लो स्तरमा उत्रेर उनीहरूलाई गाली गर्ने गरेका छन् । वकिलहरूलाई संविधान नपढेको भनेर हप्काउँदै छन् । बहुमत सहित अलग भएका आफ्नै साथीहरूलाई भगौडा बताउँदै छन् । पार्टीका कैयौँ पुराना र कर्मठ नेताहरूलाई केटा र ठिटा भनेर अपमान गर्दैछन् । उनको निम्न स्तरीय र अराजनीतिक भाषा शैलीका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस प्रकारका सयकडौँ उदाहरण छन् । त्यस प्रकारको गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्ने बेलामा उनले ख्याल गर्नुपर्ने एउटा कुरा हो : उनी नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् र उनले जे बोल्छन्, त्यो सारा संसारमा सुनिन्छ ।
वास्तवमा खाली दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट नदिएको कारणले मात्र होइन, ओलीको सम्पूर्ण व्यवहार, कार्यशैली वा भाषाशैलीका कारणले संसारभरि नेपालको बेइज्जती भइरहेको छ । अर्का शब्दमा, त्यसरी स्वयम् उनी हल्का हुँदै गइरहेका छन् भने उनले विश्वका अगाडि नेपाललाई पनि हल्का बनाउँदै गइरहेका छन् ।
लेखक: नेकपा (मसाल) का महामन्त्री हुन् ।